Mpamatsy vidin'ny orinasa mpanamboatra mpamatsy vidin'ny kitapo 100% harona plastika azo simba
Ny kitapo fako ao an-trano dia vita amin'ny starch mais sy fitaovana PBAT, izay azo zahana 100%. Ny kitapo fako dia tsy mora rovitra amin'ny tanana, ny fotony dia simba, ary ny interface dia lasa olombelona. Kitapo fako biby tsy azo ovaina azo namboarina ho habe, loko ary fonosana mifanaraka amin'ny takiana. Ny orinasa dia manolo-tena ho lasa orinasa sariaka tontolo iainana manompo an'izao tontolo izao!
Kitapo fako avo lenta ho an'ny kitapo alika ho an'ny alika biby fiompy poapo fako maloto alika voajanahary.
Ny kitapo paompy biby azo zezika 100% azo avy amin'ny zana-katsaka sy PBAT, izay mampihena ny famoahana gazy karbonika mihoatra ny 60% ary mora kokoa amin'ny tontolo iainana. Madio kokoa sy madio kokoa ny fanadiovana ny lanin'ilay alika amin'ny fampiasana isan'andro.